टर्कीपालन व्यवसायतर्फ आकर्षित हुँदै युवा - Naya Aawaj
१७ भदौ । सञ्चालन गर्न सजिलो र राम्रो आम्दानी दिने भएकाले ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिकाका युवा टर्कीपालन व्यवसायतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् ।
फुङ्लिङ नगरपालिका–३ क्यानिमका नेत्र प्रसाद भट्टराईले टर्की पाल्दा राम्रो आम्दानी भएपछि त्यहाँ टर्कीपालन बढ्दै गएको छ । युरोपियन चरा भनेर चिनिँदै आएको टर्कीको मासु र अण्डा दुवैबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि स्थानीयवासीले आफ्नो क्षमता अनुरुप १० देखि ७० वटासम्म पाल्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । यसको मासु प्रतिकिलो रु. एक हजारमा बिक्री हुने गरेको बताइएको छ ।सुरुमा आठ/दश वटा प्रति चल्ला (टर्कीको बच्चा) रु. ७०० मा खरिद गरेर परीक्षणका रुपमा पाल्न सुरु गरेका भट्टराईले यस व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी लिन थालेपछि अहिले यसको सङ्ख्या बढाएर व्यावसायिक रुपमै पालन सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै मेरिङ्देन गाउँपालिका–३ खाम्लुङ दोभानका मान बहादुर लिम्बूले दुई/तीन वर्ष अघिदेखि नै टर्कीपालन गर्दै आएको बताउनुभयो । दोभान बजारका यी होटल व्यवसायी लिम्बूले ग्राहकबाट माग हुन थालेको र विदेशी पर्यटक समेतले बढी रुचाउने गरेकाले आफैंले टर्कीपालन गर्न थालेको बताउनुभयो । टर्कीपालन सुरु गरेसँगै यसबाट सोचेभन्दा राम्रो आम्दानी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
एकदिने चल्लाको रु. ३५० देखि ४५० सम्म मूल्य पर्ने र ६ महिनापछि खान योग्य हुने स्थानीयवासीको भनाइ छ । चार महिनापछि महिनामा दुई किलोसम्मको दरले बढ्ने, बोसोरहित हुने र मानिसको हड्डी बलियो बनाउनुका साथै मुटु, मधुमेह, रक्तचाप लगायत दीर्घकालीन रोगी सबै प्रकारका बिरामीले खान मिल्ने भएकाले यसको मासुको माग बढी छ । चराएर, अन्न, घाँस दिएर पाल्न सकिने, भ्याक्सिन दिन नपर्ने, पाल्दा दुर्गन्ध नहुने र रोगले आक्रमण नगर्ने भएकाले जोखिम पनि कम हुने बताइएको छ ।
तराईको तुलनामा पहाडमा पालेका टर्कीको मूल्य अझ राम्रो पाइने र यसको मासुको माग बढी रहेकाले माग अनुरुप पूर्ति गर्न नसकिएको लिम्बूले बताउनुभयो । एक सय टर्की पाल्दा ६ महिनामा झन्डै रु. चार लाखसम्म कमाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । ए ग्रेड जातको टर्की नौ महिनामा १८ किलोसम्म हुन्छ । झट्ट हेर्दा वन कुखुरा जस्तो देखिने टर्की हेर्नका लागि आकर्षित पक्षी भए पनि अण्डा उत्पादन र मासुकै प्रयोजनका लागि पाल्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । टर्कीको अण्डा प्रतिगोटा रु. २५० र मासु प्रतिकिलो १,३०० सम्ममा खरिदबिक्री हुने गरेको छ ।